Waa la daabacay28.04.2022
Haddii sababta joogitaanku isbeddelo islamarkaasna aad doonayso in aad Finland joogto, codso sharciga deganaanshaha oo cusub. Waxaad sharciga deganaanshaha oo cusub u baahan tahay tusaale ahaan, marka aad jaamacadda dhammayso oo aad Finland shaqo ka billowdo ama aad ka guursato.
Sideen ogolaanshaha joogista ku meelgaarka ah ugu bedeli karaa ogolaansho sii-socda?
Sideen sababo cusub ugu codsan karaa ogolaanshaha joogista?
Arday shaqaale isu bedelay
Haddii aad heysato ogolaanshaha joogtada ah ee waqtigeedu cayiman yahay (Ogolaansha A ama B) sababtii joogistaada Finlandina ay isbedeshay, waa inaad sababo kale dartood ku codsataa ogolaanshaha joogista. Haddii aad heysato ogolaanshaha joogista joogtada ah uma baahnid inaad codsataa ogolaanshaha sababta joogistaadi haddii ay xitaa isbedeshay.
Ogolaanshaha joogista waxaad ku codsan kartaa sababaha soo socda dartood:
dib u soo guurid
asal ahaan Finnish ah
badbaado caalami ah
Waxaa wannaagsan in la xusuustaa in sababaha joogistaada Finland ay saameyn ku yeelan karaan xuquuqda aad Finland ku leedahay. Tusaale ahaan ogolaanshaha joogista ee xiriir qoys waxaa ku jira xaq u lahaansho shaqo oo ka ballaaran ogolaanshaha joogista ee sababo waxbarasho lagu ogolaaday.
Oggolaanshaha sharcigu wuxuu inta badan ku xiran yahay in dhaqaalaha nololmaalmeedkaadu u sugan yahay. Dhaqaalaha nolomaalmeedka la sugan waxaa loola jeedaa, in aad heysato hanti ku filan in aad Finland ku noolaato.
Dakhli kugu filanLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Haddii aad heysato ogolaashaha joogista ee ku meelgaarka ah (ogolaanshaha B) waxaad codsan kartaa ogolaanshaha sii-socda (ogolaanshaha A) haddii sababta joogistaada Finland ay iska bedesho ku meelgaarnimadi isuna bedesho joogto.
Haddii aad heysato ogolaanshaha joogista ee ku meelgaarka ah oo aad ku heshay xiriir qoys waxaad codsan kartaa ogolaansha sii-socda marka ay xubnaha qoyskaadu codsanayaa ogolaanshaha sii-socda. Sababo kale ayaad ku codsan kartaa ogolaansha joogista sii-socota haddii sababtu tahay mid ah sii-socota.
Haddii aad heysato ogolaansho ku meelgaar ah oo aad ku heshay sababo waxbarasho waxaad heli kartaa ogolaanshaha joogista sii-socoda haddii sababtii aad Finland ku joogtay ay isbedesho oo kaliya. Waxbarasho darteed laguma heli karo ogolaanshaha sii-socda. Sababta joogistaada Finland waxay bedelmi kartaa marka aad Finland shaqo ka hesho ama aad ku guursato qofka u dhashay Finland ama qof heysta ogolaanshaha joogista Finland ee joogtada ah.
Haddii aad heysato ogolaanshaha joogista ee ku meelgaarka ah oo aad ku qaaday shaqo ama shirkad aad leedahay darteed waxaad codsan kartaa joogista sii-socota marka aad Finland joogto laba sano oo xiriir ah.
Ogolaanshaha joogitaanka oo sababo kale ku saleysanLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Dooro foomka codsiga oo ku haboon, hadba sababta aad u dalbaneysid ruqsada cusub. Codsiga ku reeb adeegga enternetka ee Enter Finland ama barta adeegga Xaafiiska dal u soo guurista. Wixii faah faahin dheeraad ah waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Ogolaanshaha sii-socda.
Haddii waxbarashadaada aad ku dhameysatay Finland waxaad heli kartaa ogolaanshaha joogista, shaqo raadsasho darteed. Marka aad waxbarashadaada dhameysato, ogolaanshihii joogista ee waxbarashaduna uu kaa dhamaaday waxaad codsan kartaa shaqo raadin darteed ogolaansha sii-socda (jatkolupa). Sharcigu wuxuu shaqeynayaa hal sano. Ogolaanshaha waxaad heli kartaa hal mar, dibna looma cusbooneysiin karo. Marka aad shaqo hesho waxaad codsan kartaa ogolaanshaha joogista sabab shaqo darteed.
Ogolaanshaha joogista shaqo raadin darteedLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Ku daro xisaabta, in haddii xaaladdaada ay isbeddesho ay saameyn ku leeyan karto oggolaanshaha sharcigaada. Oggolaanshaha sharciga wakhtiga cayiman waa lala laaban karaa, haddii sababihi lagu bixiyay aysan aheyn kuwa weli jira. Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinland Miyaan weyn karaa ogolaanshiyaha joogitaanka?